Pocophone wuxuu helayaa cusbooneysiinta MIUI 11 ee adduunka | Androidsis
MIUI 11 mar hore ayey ku timid qaab deggan oo loo yaqaan 'Xiaomi's Pocophone', oo sidoo kale loo yaqaan Poco F1 ama Pocophone F1. Cusbooneysiintu si tartiib tartiib ah ayey u kala firidhsan tahay xilligan, markaa haddii aad isticmaale ka tahay taleefannadan casriga ah ee aadka u sarreeya ee leh Snapdragon 845, malaha weli maadan helin.
Si kastaba ha noqotee, imaatinkaaga terminaalkan wadamada oo dhan horeyba waa loo xaqiijiyay. Markaa waa arrin kaliya dhowr saacadood ama maalmo si loo gaaro dhammaan unugyada.
Cusboonaysiinta waxay keeneysaa shaashadda ugu dambeysa Oktoobar 2019 ee loogu talagalay Poco F1. Waxaa horey u jiray warar sheegaya in xirmada qalabka cusub ee qalabka lagu qaybiyo dalka Talyaaniga. Isticmaalayaasha adduunka oo idil, sidaan soo sheegnay, waa inay ugu dambeyntii helaan cusbooneysiintan maalmaha soo socda. Ogsoonow in cusbooneysiintu ay culeyskeedu yahay 1.8 GB, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad soo dejiso oo aad ku rakibto heer batteri oo wanaagsan iyo isku xirka Wi-Fi, si looga fogaado nooc kasta oo cilad iyo cunno ah xogta aan loo baahnayn ee laga helo adeeg bixiyaha .
In kastoo firmware-ku uu ku saleysan yahay Android 9 Pie, waa la xaqiijiyay taas telefoonka ayaa heli doona cusbooneysiin ku saabsan Android 10 goor dambe. Ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan jadwalka saxda ah ee la bilaabayo, laakiin adeegsadayaashu way heli karaan dhammaadka sanadkan.
Pocophone waa terminaal waxqabad sare leh oo la bilaabay bishii Agoosto 2018 iyadoo shaashaddiisu tahay 6.18-inch IPS LCD lehna FullHD + qaraar ah 2,246 x 1,080 pixels iyo xajmi dheer, oo ah sideed-core Snapdragon 845, 6/8 GB of Xusuusta RAM, 128/256 GB oo ah kaydinta gudaha iyo batari 4,000 mAh ah oo leh taageero si dhakhso ah loogu soo oogo 18 watts Labada kamaradood ee ay leedahay waxay leedahay 12 MP shidma aasaasiga ah iyo 5 MP oo kicin labaad ah; kamaradda is-qaadashada ee ay isticmaasho waa 20 MP.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Xiaomi Pocophone wuxuu ugu dambeyntii helayaa xasilloonida MIUI 11 adduunka oo dhan
Cusboonaysiinta la sii daayay waxaa loogu talagalay Beta Tester, oo ka diiwaangashan My Pilot, maahan mid loogu talagalay dhammaan isticmaaleyaasha wali.
Jawaab Jesús Rodríguez